Barcelona Oo Booska Kala Baxday Real Madrid Ka Dib Guul Ay Ka Gaareen Sevilla, Messi Oo Wacdarro Dhigay & Labo Xiddig Oo Ka Dhaawacmay Barca | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona Oo Booska Kala Baxday Real Madrid Ka Dib Guul Ay Ka Gaareen Sevilla, Messi Oo Wacdarro Dhigay & Labo Xiddig Oo Ka Dhaawacmay Barca
Barcelona ayaa kaalinta labaad kala baxay kooxda ay cadowga yihiin ee Real Madrid kuwaasoo kulan uu u harsan yahay ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen kooxda Sevilla oo marti loo ahaa.
Lionel Messi ayaa gool iyo caawin isku darsaday halka Ousmane Dembele uu ka baxay abaarta goolasha xilli Barcelona ay 53 dhibcood uruursatay iyagoo labo dhibcood ka danbeeya kooxda hogaanka heysa ee Atletico oo labo kulan ay u harsan tahay halka ay hal dhibic ka sareeyaan Los Blancos oo seddexaad u dhacday islamarkaana kulan uu u harsan yahay.
Lionel Messi aaya kooxda Sevilla ka horyimid 42 kulan waayihiisa ciyaareed, wuxuu ka dhaliyay 39 gool iyo 19 caawin.
Barcelona ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigtay kulankii adkaa ee maanta ee martida loo ahaa Sevilla, iyagoo u muuqday inay jaanta isla heleen inkastoo aysan ku badinin goolal badan.
Waxay ku qaadatay daqiiqadii 30aad inay hogaanka u qabtaan ciyaarta markii uu Lionel Messi uu kubad u dhex bixiyay Ousmane Dembele kaasoo shabaqa ku hubsaday, waa goolkiisii ugu horeysay ee uu dhaliyay muddo 11 kulan ka dib ah. Iyadoo ay ugu danbeysay inuu Barcelona gool u dhaliyo bishii December ee sannadkii la soo dhaafay.
Demebel ayaa noqday xiddiga seddexaad ee Faransiiska ee ugu goolasha badan Barcelona isagoo dhaliyay 26 gool, wuxuu ka danbeeyaa Antoine Griezmann (27) iyo Thiery Henry (47).
Goolkaas uu dhaliyay Dembele ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta, iyadoo Barcelona ay weerarkeeda kordhisay qeybtii labaad ee ciyaarta.
Daqiiqadii 62aad ayuu daafaca Mareykanka ee Barcelona Dest birta garaacay ka dib kubad uu ka helay Jordi Alba.
Daqiiqadii 70aad Barcelona ayaa u muuqatay inay heshay goolka labaad markii uu Lenglet madax ku dhaliyay laad xor ah oo la soo qaaday laakiin goolka waa la diiday madaama uu daafaca offside ahaa.
Murugo ayaase u soo hooyatay Barcelona markii uu ka dhaawacmay xiddigii xilli ciyaareedkan u soo baxay ee Pedri kaasoo dhaawac muruqa ah uu soo gaaray islamarkaana sababtay in la bedelo daqiiqadii 72aad.
Daqiiqadii 83aad Sevilla ayaa mar keeda shabaqa soo taabtay ka dib gool uu u dhaliyay En-Nesyri laakiin goolka waa la diiday madaama uu weeraryahanka Sevilla kubada gacanta ku taabtay ka hor inta uusan dhalinin.
Barcelona ayaa dhaawac kale uu soo wajahay markii uu ka dhaawacmay daafaca Araujo kaasoo isba bedel ku soo galay, qasabna ay noqotay in la bedelo isagoo daqiiqado garoonka ku jiray.
Xiddiga Barcelona Lionel Messi ayaa dhamaadkii ciyaarta guusha u xaqiijiyay Barcelona isagoo mar kale shabaqa ka soo taabtay Sevilla, wuxuu dhaliyay goolkiisii 19aad ee horyaalka La Liga isagoo xajistay hogaanka tartanka gooldhalinta ee Pichichi.
Lionel Messi ayaa gool dhaliyay ama caawiye ka noqday shantii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Barcelona ku garaacday Sevilla.